Konke kumi ngomumo emcimbini wokuvula imikhankaso yokhetho - EFF | News24
Konke kumi ngomumo emcimbini wokuvula imikhankaso yokhetho - EFF
Soweto- Okhulumela iqembu le-Economic Freedom Fighters uMbuyiseni Ndlozi uthi abalindele lutho olubi emcimbini wabo wokwethula umkhankaso walolu khetho, kubika iSABC.
Leli qembu lithi konke sekumi ngomumo ngalo mcimbi ozobanjelwa enkundleni yezemidlalo e-Orlando Stadium ngempelasonto.
“Asilindele lutho ezosiphazamisa ngaphandle kokuthi kube nabantu abafikayo abazoqala uthuthuva. Sizoqale sibikele amaphoyisa uma kukhona okuyinkinga kodwa nathi sizozama ngakho konke ukuzivikela,”kusho uNdlozi.
OLUNYE UDABA:Kugwazwe owe-EFF behilizisana nabe-ANC
Uthi bazocula iculo lesizwe iNkosi Sikelela njengoba umqophi wayo u-Enoch Sontonga wayeyibhalile, hhay njengoba selashintshwa kwafaka nezinye iziqeshana.
“Kunengxenye kuleli culo lesizwe ebizwa nge-Die Stem esingafuni ukuyicula futhi asiyifuni okwangempela ngoba iculo lempi. Kwakuyiculo elisemthethweni lalabo ababenodlame futhi bebandlulula abantu abamnyama, elikahulumeni wengcindezelo futhi wondlebe zikhanya ilanga.”